Munyika yekupakira zvigadzirwa uye zvigadzirwa, zvisikwa uye kufambira mberi zvinogara zvichitungamira kune nyowani nyowani dzekuvandudza. Mimwe yemaitirwo echazvino akatotora musika nedutu uye ari kuchinja mashandiro anoita makambani zvigadzirwa zvavo zvekupakata uye maitiro ekutakura. Inofanira kuve noti ...
Kupakira kunofanirwa: chimbofungidzira nyika isina iyo. Pakagara paine imwe mhando yekutakura uye paizogara paine, asi pane nzira here yekuti tirege huwandu hwekusvibisa nemarara zvinogadzirwa kubva kune izvi zvinodiwa zvehupenyu? Ndekupi kwatinoburitsa mutsetse muchibvumirano chekugamuchira iyo ...
Komputa inodzivirirwa: matanho emusika emangwana
Kupakata shanduko kuri kuwedzera uye nekudzokorodza kwakatungamira mukusimudzira kutsva mumusika wese, kunyanya sezvo makambani achishanda kuti mapakeji avo awedzere kugarisana. Mhedzisiro imwe yakabuda mune iyi inotarisisa nyowani pane inogadzirwa zvakaputirwa, mukuyedza kuratidza kuti comp ...